တရုတ်လက်ကိုင်ဖုန်းများ၊ ယုံကြည်ရသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကို ၀ ယ်ယူရမည့်နေရာ - စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ | Androidsis ပါ
ဟိုဆေး Alfocea | | တရုတ် Android, မိုဘိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်တွင်လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်စမတ်ဖုန်းအရေအတွက်နှင့်အမျိုးမျိုးမှာအလွန်ကြီးမားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုပြောင်းလဲလိုသောအခါသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းများအလွန်ကွဲပြားသောကြောင့်တကယ့်ရှုပ်ထွေးမှုကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်အရည်အသွေးနိမ့်ပို။ ပို။ ပို။ ရောနှောနေကြသည်နှင့် အနိမ့်၊ အလယ်လတ်၊ အမြင့်ဆုံးသို့မဟုတ်ပရီမီယံအကွာအဝေးကိုခွဲခြားသောမျဉ်းသည် ပို၍ မှုန်ဝါးလာသည်.
ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ယနေ့ Androidsis တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးတရုတ်ဖုန်းများ၊ အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းများ၊ စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းများကိုဝယ်ယူရန်အကြံဥာဏ်များပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီကနေ့မှာသင်ဟာသင်လိုအပ်တဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းအမျိုးအစား၊ သင်လိုချင်တဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအမျိုးအစားနှင့်သင်ဝယ်ယူတော့မည့်အရေးမကြီးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အရာက ဘယ်မှာဝယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးတရုတ်ဖုန်း စျေးကွက်က။
တရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများအကြောင်းပြောသောအခါ၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောအရည်အသွေးရှိသောမိတ္တူများ၊ အတုအယောင်ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုသာတွေးနေသူများစွာရှိသည်။ သို့သော်ဤစျေးကွက်သည်များစွာပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ လိုအမှတ်တံဆိပ်တွေအကြောင်းခဏစဉ်းစားကြည့်ရအောင် Meizu, Huawei, Vivo, Oppo သို့မဟုတ် Xiaomi။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်နိုင်ငံများစွာ၌မရရှိနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည် စားသုံးသူများ၏ကြီးထွားလာသောအရေအတွက်အားဖြင့်နှစ်သက်သဘောကျသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာရိုးရိုးလေးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အရည်အသွေးမြင့်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ရန်သင်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးစျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ပေါင်းစပ်နိုင်ပါပြီ Samsung သို့မဟုတ် Apple ကဲ့သို့သောအခြားမီဒီယာကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကကမ်းလှမ်းသည်ထက်
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ“ မိတ္တူများ” အကြောင်းပြောခြင်းသည်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတိတ်နှင့်ယခုခေတ်တွင်အမှတ်တံဆိပ်များစွာသည်အခြားသူများကိုကူးယူသည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်မှာထင်ရှားသည် (မကြာသေးမီနှင့်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာ OnePlus5ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည် iPhone7နှင့် ပတ်သက်၍“ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဆင်တူချက်” ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ Plus အား Apple မှ) သို့သော်, စတုဂံပုံသဏ္aာန်မိတ္တူဖြစ်သနည်း အိုင်ကွန်များစီစဉ်ခြင်းသည်မိတ္တူတစ်ခုလော။ အဆိုပါ rounded အနားမိတ္တူဖြစ်ပါသလား ကောင်းပြီ၊
အကောင်းဆုံးတရုတ်မိုဘိုင်းလ်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဝယ်ယူရမည်ကိုဆုံးဖြတ်သောအခါစပိန်နိုင်ငံရှိစတိုးဆိုင်များတွင်သို့မဟုတ်တရုတ်ရှိအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များတွင်ပြုလုပ်သင့်မသင့်မှာမေးခွန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအကြားခြားနားချက်သည်စျေးနှုန်းနှင့်အာမခံချက်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားရမည့်တစ်ခုတည်းသောရှုထောင့်မဟုတ်ပါ။
တရုတ်အွန်လိုင်းစတိုးတွေမှာတွေ့နိုင်တယ် စျေးနိမ့် စျေးကွက်က။
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်တရုတ်စတိုးဆိုင်များတွင် ၀ ယ်ယူသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းအားအကောက်ခွန်ဌာန၌ထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာငွေပေးချေမှုသည်ယူရို ၄၀ ခန့်ဖြစ်နိုင်သည်။
စပိန်သို့မဟုတ်အီးယူနိုင်ငံတစ်ခုခုမှာ ၀ ယ်တဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဥပဒေကိုပြby္ဌာန်းထားတယ် စားသုံးသူအခွင့်အရေးအတွက်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာကုန်ပစ္စည်းအားအခမဲ့ပြန်ပို့နိုင်ရန်အနည်းဆုံး ၁၄ ရက်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုချို့ယွင်းချက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြforနာများအတွက်အနည်းဆုံး ၂ နှစ်အာမခံချက်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည် - ပြီးနောက်ရောင်းချမှု။ ရှစ်လအတွင်းကီလိုမီတာထောင်ပေါင်းများစွာဝေးသည့်တရုတ်ရောင်းချသူနှင့်ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ ယ်သောအခါပုံမှန်အားဖြင့်အိမ်၌ထုတ်ကုန်ကိုလက်ခံရရှိရန်ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်မှခြောက်ဆယ်အထိပင်စောင့်ရမည်။ စပိန်နိုင်ငံကို ၀ ယ်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်နေ့မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဤကွဲပြားခြားနားမှုများကိုသင်တန်ဖိုးထားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်သည်စပိန်နှင့်ပြည်ပရှိအကောင်းဆုံးတရုတ်ဖုန်းများကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနေရာအချို့ကိုပြတော့မည်။
အစအ ဦး ၌ပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်းစပိန်အွန်လိုင်းစတိုးများ၌ (သို့မဟုတ်ဥရောပသမဂ္ဂ၏မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို) အကောင်းဆုံးတရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများ ၀ ယ်ယူခြင်း၏အဓိကအားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းခြုံမှုရှိလိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်ကာလအတွက်အာမခံ, အသိုင်းအဝိုင်းစားသုံးသူဥပဒေများကတည်ထောင်အဖြစ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအားပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းကိုကုန်ကျစရိတ်မလိုဘဲပထမ ၀ က် (၁၄) ရက်အတွင်းရှင်းလင်းချက်ပေးရန်မလိုပဲ (သို့မဟုတ်ရောင်းသူမှသတ်မှတ်ထားသည့်ရေရှည်) ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပြန်လာအတွက် စျေးနှုန်းများများသောအားဖြင့်ကြောင်းအနိမ့်မရှိကြပေ တရုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်မည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်အကျိုးအမြတ်ရှိသောထုတ်လုပ်သူစျေးနှုန်းများမှစတင်ပြီးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးသောအာမခံချက်လည်းရှိသည်။ ကျနော်တို့အများကြီးအများကြီးအစောပိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းအသစ်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
စပိန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးစတိုးဆိုင်အချို့မှာသင်အကောင်းဆုံးတရုတ်မိုဘိုင်းလ်များကို ၀ ယ်နိုင်သည်။
အမေဇုံ။ အင်တာနက်အရောင်းအ ၀ ယ်ကုမ္ပဏီကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကိုင်ဖုန်းအသစ်ကို ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ သူတို့၏စျေးနှုန်းများသည်စျေးကွက်တွင်အများအားဖြင့်အများဆုံးအကျိုးအမြတ်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ သင်သည် Amazon ၏အာမခံချက်ကိုရရှိလိမ့်မည်။ သင်သည်အဓိကသုံးစွဲသူဖြစ်ပါကနောက်တစ်နေ့တွင်အိမ်တွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အမေဇုံတွင်အကောင်းဆုံးတရုတ်မိုဘိုင်းအမြောက်အမြားကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်စတိုးဆိုင်ဖြစ်သည့်အခါများသောအားဖြင့်သင့်အားအကြံပြုလေ့ရှိသည်။
Fnac ဘယ်မှာစတိုးဆိုင်၏နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည် သင်ဆည်းပူးနိုင်သည် အကောင်းဆုံးတရုတ်မိုဘိုင်းအချို့။ အမေဇုံကဲ့သို့ပင်သင်သည်ဤပြင်သစ်ကွင်းဆက်တွင်ပါ ၀ င်လျှင်အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၎င်း၏စျေးနှုန်းများသည်များသောအားဖြင့်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်သကဲ့သို့ Amazon ကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်သောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိကြပါ။ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတစ်ခုမှာ၎င်းသည်တရားဝင် Xiaomi ဖြန့်ချိသူဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဤအမှတ်တံဆိပ်မှမိုဘိုင်းတစ်ခုလိုအပ်ပါကကြည့်ရှုရန်ကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မီဒီယာ Markt ၎င်းသည်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်း၊ ကွန်ပျူတာနှင့်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးရောင်းချသူများအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာ ဒီမှာ သငျသညျအပေါငျးတို့သစျေးနှုန်းမှာတရုတ်မိုဘိုင်းအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည်။
PC အစိတ်အပိုင်းများ။ ၎င်း၏အမည်ကိုနေသော်လည်း, ဒီစပိန်ရောင်းသူ Alhama (Murcia) တွင်အခြေ ပြု၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်လူသိအများဆုံးအွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်လာမည့်နေ့တွင်သင်အိမ်၌ရှိမည့်တရုတ်မိုဘိုင်းအချို့ကိုလည်းလည်းပေးသည်။
Power Planet ကိုအွန်လိုင်း။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Murcia ကနေမရွေ့သေးဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Alhama နဲ့ Totana မြို့တွေမှာငါ့အကြိုက်ဆုံးတရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းရောင်းသူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူတို့သည်စပိန်တစ်နိုင်ငံလုံးလုံးအတွက်အကျိုးရှိသည်၊ အလွန်စျေးနှုန်းချိုသာသောအမြန်နှုန်းဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးသည်၊ ရောင်းချပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၊ တရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအတွက်အကြီးမားဆုံးသောမျိုးကိုတစ်ခုပေးသည်။ ငါအတွေ့အကြုံနှင့်အတူစကားပြော။ သင်မှတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည် ဒီမှာ.
Geek ဘဝ ၎င်းသည်စပိန်နိုင်ငံမှလည်ပတ်ခြင်းကြောင့်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာအာမခံချက်နှင့်ရောင်းပြီးသွားသောဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်၏အွန်လိုင်းစတိုး ၄၈ နာရီအတွင်းတရုတ် (စရိတ်သက်သာ) မှစပိန်မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်များကို၎င်းတို့ထံရရှိနိုင်လျှင်ချက်ချင်းပို့နိူင်သည်။
တရုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအကောင်းဆုံးတရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုတိုက်ရိုက် ၀ ယ်ခြင်းက၎င်း၏အောင်မြင်မှုကိုရှင်းပြသည့်အခြေခံအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းတွေကိုကမ်းလှမ်းပါ။ သို့သျောလညျးအစအ ဦး ၌ငါတို့ဖော်ပြခဲ့သောအားနည်းချက်များကိုအလွန်အရေးကြီးပါသည်ကြောင့်သူတို့ကိုအလွန်သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားစာပိုဒ်အနည်းငယ်ထပ်မံတင်သွင်းရန်နှင့်ဂရုတစိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဒါ့အပြင်သင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်အကောင်းဆုံးတရုတ်ဖုန်းများကို ၀ ယ်နိုင်တဲ့လူကြိုက်အများဆုံးတရုတ်စတိုးဆိုင်အချို့ကတော့ -
Aliexpress ၎င်းကို "တရုတ်အမေဇုံ" ဟုလူသိများသည်။ ဒီမှာ အွန်လိုင်းဆိုင် သင်သည်မည်သည့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း (နှင့်သင်စိတ်ကူးနိုင်သမျှနီးပါး) ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းများဖြင့်တွေ့လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သုံးစွဲသူများစွာသည်ဤထင်မြင်ချက်ကိုမျှဝေမည်မဟုတ်ဟုလည်းဆိုသော်ငြားလည်းသူတို့၏ပမာဏကြီးမားမှုကြောင့်ဝယ်လက်များအတွက်လုံခြုံမှုကိုပေးဆပ်ရန်များစွာကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤစတိုးဆိုင်များကိုစော်ကားရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုသင်မထင်စေလိုပါ - ကျွန်ုပ်သည် (Xiaomi router အပါအဝင်) ကျွန်ုပ်ဝယ်ယူခဲ့သောထုတ်ကုန်ကိုကိုယ်ပိုင်အခြေခံအနေဖြင့် - (၃) ကြိမ်တိုင်ကျွန်ုပ်မရရှိနိုင်သည့်အပြင် (၃) ကြိမ်စလုံးကျွန်ုပ်၏ငွေကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ရှင်းလင်းချက်ပေးရန်မလိုဘဲ။
သေတ္တာထဲမှာအလင်း ၎င်းသည်လူကြိုက်အများဆုံးတရုတ်အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ စပိန်အပါအဝင်မည်သည့်တိုင်းပြည်နီးပါးမှသင်္ဘောများနှင့် သင့်ရဲ့ catalog အရမ်းကျယ်ပြန့်တယ်
Xtreme သဘောတူညီချက်ရ မိုဘိုင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းများနှင့်အတူယခင်အွန်လိုင်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသည့်တရုတ်အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဝယ်သူတစ် ဦး စီအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခု သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်ကိုအွန်လိုင်းမှဝယ်ပါ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း။
Igogo တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် စပိန်ဘာသာဖြင့်စာမျက်နှာ စပိန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်းများစွာသို့ကုန်ပစ္စည်းများဖြန့်ဖြူးပေးသည့်ကောင်းမွန်သောရောင်းအားကောင်းသည့်အထောက်အပံ့နှင့်အတူ။
ကောင်းပြီတစ်ဦး ကုန်ဆိုင် ဘယ်သူကများသောအားဖြင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုများများလုပ်တယ်၊ အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံခြားတွင်ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကအကောင်းဆုံးတရုတ်မိုဘိုင်းလ်များကို ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ဥရောပ၌ဂိုဒေါင်အမြောက်အများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့တွင်ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်ဆိုပါကသင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်ကိုမျှော်မှန်းထားသည်ထက်စော။ သင်ရနိုင်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလုံခြုံဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကတည်းကအခက်ခဲဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် တရုတ်ထုတ်လုပ်သူအနည်းငယ်ကမူ၎င်းတို့၏ဆိပ်ကမ်းများကိုပြည်ပသို့တိုက်ရိုက်ရောင်းကြသည်နှင့်လုပ်သောသူတို့သည်အလွန်ကန့်သတ်ထားသောနိုင်ငံများတွင်ရှိနေသည်။ အထူးသဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပရိုမိုးရှင်းများကိုရယူရန် (သို့) နည်းပညာပံ့ပိုးမှုလိုအပ်လျှင်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရရှိထားသည့်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Huawei။ တရုတ်မှာအကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ရှိပါတယ် ဥရောပအွန်လိုင်းစတိုး ဘယ်မှာငါတို့သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အများစုဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်သင်အနေဖြင့်ရောင်းပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်ပြီးသတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွင်းပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်သည်။
လည်း Meizu တင်ပို့ရောင်းချမှုကို လက်တွေ့အားဖြင့်လူတိုင်းအတွက်, သူတို့ရဲ့စတော့ရှယ်ယာအမြဲအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ထပ်အကြီးမားဆုံးတရုတ်ထုတ်လုပ်သူများ၊ Oppo, တစ်ခုရှိ အွန်လိုင်းဆိုင် အာဂျင်တီးနား၊ ကိုလံဘီယာ၊ ပီရူး၊ ဘိုလီးဗီးယားနှင့်စပိန်နိုင်ငံများအပါအ ၀ င်မတူကွဲပြားသောနိုင်ငံများသို့တင်ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆိပ်ကမ်းအများစုကိုလည်းသင်ဝယ်ယူနိုင်သည် ZTE သည် မိမိအခုနှစ် အွန်လိုင်းဆိုင် စပိန်တွင်။
နှင့်ပတ်သက် Xiaomi ကယခုအချိန်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်ကျော်ကြားသောတရုတ်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် တင်ပို့ရောင်းချမှုကို ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ယူအက်စ်စသည့်နိုင်ငံများသို့ရောက်ရှိသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်၏အဓိကအကြောင်းရင်းသည်အခြားဒေသများတွင်သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သောမူပိုင်ခွင့်ပြproblemsနာများဖြစ်သည်။
Ulefoneအလွန်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နိမ့်သောစျေးနှုန်းများရှိသောလက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်ထင်ရှားသည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းရှိသည် စပိန်ဘာသာဖြင့်စာမျက်နှာ စပိန်နိုင်ငံအပါအ ၀ င်မတူကွဲပြားသောနိုင်ငံများမှ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အင်္ဂလိပ်နှင့်အင်္ဂလိပ်။
ယခုအခါတရုတ်အွန်လိုင်းစတိုးများမှစပိန်နိုင်ငံများမှအကောင်းဆုံးတရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများကို ၀ ယ်ယူသောအခါအဓိကအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုသင်သိရှိလာပြီ ဖြစ်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းမှာသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။ သငျသညျပေးအပ်ခြင်း၏အာမခံချက်နှင့်မြန်နှုန်းကိုပိုနှစ်သက်ပါသလားသို့မဟုတ်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောစျေးနှုန်းကိုကြိုက်နှစ်သက်သလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » တရုတ်ဖုန်းကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Javier Mesa ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Blackview BV 8000 (6Gb of RAM, mobile ကြီး) ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခဲ့ပါသည် http://www.movileschinosespana.comသူတို့စာရင်းအတွက်လည်းကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာ Blackview နဲ့ Xiaomi Agents တွေဖြစ်တယ်။ မင်္ဂလာပါ
Javier Mesa သို့ပြန်သွားပါ
လွန်ခဲ့သောလများကကျွန်ုပ်သည် xiaomo Mi A1 ကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး၊ သူတို့သည်အကောင့်ထက်ပိုမိုယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏တင်ပို့ပုံပေါ်မလာခြင်းနှင့် powerplanet ကကျွန်ုပ်အားခြေရာခံနံပါတ်တစ်ခုပေးအပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်စာပို့သူအားလုံးကိုသက်တမ်းတိုးရမည်။ ဒါပေမယ့်နေ့ ၅း၁၀ / ၂၀၁၈ နေ့ရောက်လာပြီ။ ငါတက်ဘလက်ကိုတောင်းတယ်၊ နေ့ ၈ မှာသူတို့ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုဆက်သွယ်တယ်၊ နောက်ဆက်တွဲ ၉ ရက်မှာဖြစ်ရပ်တွေပေါ်လာတယ်၊ ၁၀ ရက်မှာငါ့ကိုသေတ္တာတစ်လုံးပေးတယ်၊ ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီကပြောတယ်။ ဘာလဲ powerplanet ကဘာလဲပို့ပေးတယ်၊ အဲဒါကဗလာလေးတစ်ခုဖြစ်နေရင် ... ကောင်းပြီ၊ အချည်းနှီးသောအကွက်ပါ။ ငါတောင်းဆိုနေတာပါ။ tipsa ရော powerplanet ကလည်းတာ ၀ န်မရှိပါ။ powerplanet ကြောင့်ယူရို ၂၀၀ ဆုံးရှုံးသွားသည်။ အမြဲတမ်းမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်၊ အီးမေးလ်တွေရှိတယ်၊ သင့်ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အချိန်၊ မလိုချင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့။ တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားရင်ကောင်းလိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့ဘဝကိုရှာကြည့်ပါ၊ ငါကသူတို့ကိုဘယ်တော့မှပြန်ဝယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး၊ နောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာသင်ဝေငှမယ်ဆိုရင်…။ ငါနှင့်သူခိုးကိုငါမဝယ်။
ယူရို ၁၈၀ အောက်လျော့နည်းသော Cube iWork12 ကို ရယူ၍ အခမဲ့ကီးဘုတ်ရယူပါ။
Moto E4 Plus သည်အိန္ဒိယတွင်စတင်ရောင်းချသည့်နေ့တွင်ယူနစ် ၁၀၀၀၀၀ ရောင်းချသည်